Inona no hatao raha lavitra ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | fifandraisana
Ny mahatsikaritra fa lavitra ny vady dia iray amin'ireo atahoran'ireo olona manao firaisana ireo. Ny elanelana kely dia miteraka tsy fitoviana amin'ny fiandohan'ny fiarahana, mahatonga ny tahotra sao ho farany io.
Manoloana an'izany, ny olona voakasik'izany dia tsy mahalala izay hatao, hiezaka ny hamerina ny zava-drehetra hiverina amin'ny tsy misy toy ny teo aloha ihany. Amin'ny tranga toy izany dia ilaina ny mitady ny antony na ny antony nahatonga ny iray amin'ireo antoko ao anatin'ny mpivady lasa lavitra ny iray hafa.
1 Ny fatorana ao anatin'ny mpivady
2 Ny antony fisarahan-toerana ao anatin'ny mpivady
3 Ahoana ny fomba fihetsika raha lavitra ny mpiara-miasa
Ny fatorana ao anatin'ny mpivady
Ho an'ny mpivady hanamafisana sy hitombo dia ilaina ny mamorona fatorana. Tsy maintsy misy ny firindrana eo amin'ny resaka fanomezana sy fandraisana. Raha tsy misy izany dia tena azo inoana fa hihamalemy tsimoramora ny fatorana ary manomboka ny fanalavirana ny iray amin'ireo antoko. Mba hamafisina ny fatorana dia tsy maintsy misy ny fahafaham-po avy amin'ny andaniny roa amin'ny sehatra ara-pientanam-po sy ara-pientanam-po. Raha tsy mitranga izany dia ara-dalàna raha lasa lavitra ny iray amin'ireo mpikambana ary tsy mahomby ny fifandraisana.
Ny antony fisarahan-toerana ao anatin'ny mpivady
Misy antony maromaro mahatonga ny olona iray ho lasa lavitra amin'ny namany:
Ilay olona dia niaritra famoizana olona manan-danja iray ary ao anatin'ny alahelo. Raha jerena izany dia ara-dalàna raha miova tanteraka ny fihetsiky ny olona ary afaka mampiseho detachment kely amin'ny mpivady. Raha mitranga izany dia ilaina ny manome azy ny fitiavana rehetra azo atao.
Ny tsindry azon'ny asa, ny fianakaviana na ny mpiara-miasa, Mety hiteraka halaviran'ny fifandraisana izany. Raha mitranga izany dia zava-dehibe ny firesahana amin'ny mpivady ary apetraho ny toro lalana rehetra azo atao handresena ny fanerena toy izany.
Ny ady amin'ny ora rehetra dia mety handreraka ilay olona ary misafidy ny hijanona lavitra eo amin'ny fiarahana. Ny ady hevitra sy ny ady dia tsy tsara ho an'ny mpivady ka toro-hevitra ny hiresaka zavatra ary hanolotra vahaolana momba izany.
Fijaliana amin'ny tsy fivadihana Io no iray amin'ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny olona iray hiala amin'ny vadiny.
Ahoana ny fomba fihetsika raha lavitra ny mpiara-miasa
Raha vantany vao fantatra ny antony mahatonga ny halavirana toy izany dia ilaina ny mitady vahaolana mba tsy ho tapaka ny rohy:
Zava-dehibe ny mipetraka eo akaikin'ny mpivady ary anontanio azy amin'ny fomba tony ny antony nanalavirana izany.
Ny fangorahana amin'ny vadinao dia manampy anao hahafantatra ny zavatra tsapanao sy afaka manamboatra ny olana.
Aza miditra amin'ny avonavona ary mifanalavitra amin'ny mpiara-miasa. Raha mitranga izany dia hiharatsy kokoa ny raharaha ary ho sarotra be ny hamerina ilay rohy.
Raha fintinina, raha lavitra ny vadinao dia ilaina ny mahafantatra ny antony nanosika an'io toe-javatra io ary miezaha mamerina ny zavatra rehetra tamin'ny fomba taloha. Ny fifamatorana ao anatin'ny mpivady dia zava-dehibe ary ny fitandremana dia tokony horaisina faran'izay betsaka mba hisorohana ny mpivady tsy hisaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Inona no hatao raha lavitra ny mpivady